Mashandisiro Ekushandisa Youtube Incognito Mode? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 499
Wanga uchiziva here kuti YouTube inosanganisa incognito modhi pakati pemabasa ayo? Kana iwe usingazive kuti chishandiso ichi chinorevei uye ndechei, tinokukoka kuti uverenge chinyorwa chinotevera apo ticha tsanangudza kuti YouTube's incognito mode ndeyei uye kuti tingaishandisa sei mumaminetsi mashoma.
Ichi ndicho chimwe chei zvishandiso zvakanakisa zvinopihwa neiyo YouTube nhare yekushandisa uye izvo zvinonyanya kushandira kusasiya chero chinhu chemukati chatinoona kuburikidza neakakurumbira vhidhiyo kutenderera chikuva. Gara nesu uye dzidza mashandisiro ekushandisa ino inoshamisa ficha.
Chii chinonzi Youtube incognito mode
Youtube nguva pfupi yadarika yatanga iyi sarudzo nyowani yekushandisa kwayo nhare uye vashandisi vanogona kuibatidza uye kudzima pese pavanenge vachida. Iyo incognito modhi inoshanda zvakanyanya kudzivirira chikuva kubva mukuchengetedza nhoroondo yemavhidhiyo ese atiri kuona kuburikidza neplatifomu.
Kana uchiita incognito modhi yeYouTube tichadaro dzivirira vhidhiyo nhoroondo kubva pakuponeswa pane mbozhanhare mbozha izvo zvatiri kubereka. Zvakare, bvisa zvese zvigadzirwa.
Izvi zvinorevei? Tiri kuzodzivirira iko YouTube kunyorera kutanga funga zvemukati zvakafanana neiya yatange tichiona kwemazuva mashoma apfuura papuratifomu. Ikozvino kurudziro yakaitwa neYouTube ichave yakajairika.
Kamwe YouTube's incognito modhi yashandiswa zvakare isu tichadzivisa kutarisa mavhidhiyo ematanishi atakanyorera. Izvi zvinoitika nekuti maSubscriptions, Inbox neLabhurari tabo zvakaremara kana uchigadzira chinhu ichi.
Matanho ekumisikidza incognito modhi
Zvakanakisa. Zvino zvatave kuziva kuti incognito mode inorevei uye ndeyei, isu tiri kuzokudzidzisa iyo yakapusa uye inokurumidza nzira yekumisikidza ichi chinonakidza chishandiso iyo yakabatanidza YouTube kune yayo mobile application.
Chinhu chekutanga kujekesa ndechekuti chiitiko ichi chinogoneswa chete kune iyo mobile app, ndiko kuti hatizokwanisi kuishandisa kubva kudesktop vhezheni. Heano matanho ekutevera:
tinya nezve yako mufananidzo mufananidzo icon
Iwe unozongoerekana waenda kuAccount menyu. Ikoko iwe uchave nekwaniso kune dzakasiyana sarudzo dze setup.
Iye zvino iwe unofanirwa kungodzvanya pane sarudzo "Bvumira incognito mode"
Maitiro ekudzima incognito modhi
Wakaona zviri nyore kwazvo kumisikidza incognito mode? Aya maitiro ari nyore uye nekukurumidza zvichave kuita kuti chishandiso ichi chishande kubva kune iyo mobile application. Pano tinotsanangura imwe neimwe yematanho ekutevera:
Vhura iyo Youtube application kubva kune yako nhare
Iwe unozoona kuti yako profile foto haichaonekwi pachiratidziri. Panzvimbo yaro pachava ne incognito mode chiratidzo.
Dzvanya pane iyo icon uye sarudza "Dzima incognito mode"
Ndiko kukurumidza kwaunenge uchinge wabuda kunze kweiyo incognito modhi Uye ikozvino iko kunyorera kuchatanga kusevha nhoroondo yese yemavhidhiyo iwe auri kutarisa kuburikidza neye mobile application.
1 Chii chinonzi Youtube incognito mode
2 Matanho ekumisikidza incognito modhi
3 Maitiro ekudzima incognito modhi